काठमाडौं, ९ असार । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक टिभी च्यानल ग्राहकले टेलिभिजन व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै अन्य ग्राहकलाई सचेतता हुन चिठ्ठी संप्रेसण गरेका छन्। कार्की राजेन्द्रले ‘जागौँ ग्राहक जागौँ’ भन्दै टिभी च्यानल र डिटीएच बन्दप्रति असन्तोष जनाएका हुन्।
हामीले महंगो पैसा तिरेर हेर्ने केबल तथा डीटीएचहरुले ग्राहक तथा सरोकारवालाहरुलाई अवगत गराउन भन्दै आज दिउँसो असार ९ गते ३ बजेदेखि भोलि १० गते ३ बजेसम्म विज्ञापन प्रसारण हुने बिदेशी च्यानल बन्द गरेको छ।
यसमा ग्राहकले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पैसा तिरेर लिएको सेवा बन्द गरेर ग्राहकलाई नै के अवगत गराउन चाहन्छन्? के उनिहरुले हामीले मासिक वा वार्षिक पैसा तिरेर सेवा लिएपछि यदि कसैलाई कतै जानुपर्यो र केही दिन सेवा चाहिँदैन भने त्यसको पैसा छूट दिन्छन्? जस्तै काठमाडौंमा बस्ने कुनै परिवार दशैं तिहारमा घर गयो भनेपनि त्यो बेलाको टिभी नखोलेको पैसासमेत तिर्नुपर्छ।
आज कतिले आइसीसी क्रिकेट हेर्न पाएनन् भने, कतिले फूटबल हेर्न पाएनन्। यसमा च्यानल बन्द गरेर यिनीहरूले कसलाई देखाउन खोजेका हुन्? मैले बुझेअनुसार क्लिन फिड भनेको कुनै च्यानलको पैसा लिएपछि त्यो च्यानलमा विज्ञापन देखाउन पाइँदैन।
प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा ग्राहकको के दोष? अब नेटफ्लिक्स, आइफ्लिक्स, अमाजोन, युट्यूबका दिन आएको जस्तो छ।
विश्वभन्दा उल्टो नेपालमा सेवा लिनेभन्दा सेवा दिने सँधैमाथि हुने चलन छ। सेवा दिनेले जस्तोसुकै, जसरी पनि दिए हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ। त्यसको बिरोध गरौं।